Njere - Misidhari
Basa redu nderekuva nyanzvi inotungamira pamhando dzemotokari dzeChinese kune vanotenga kunze kwenyika uye vanogovera zvakafanana:
● Ipa yakazvimirira yekubvunza masevhisi emusika wemotokari weChinese.
● Kurudzira mhando dzeChinese dzakanakisa uye chengetedza hukama kune vatengesi vekunze.
● Kuvaka ushamwari hwenguva refu nehuwandu hunoremekedzwa hwekutendeseka mune zvebhizimisi maitiro.
Pamusoro pezvigadzirwa zve "hardware" (databases/reports), Misidhari inewo rekodhi rekodhi mukupa yakazvimirira "software" masevhisi (kubvunza) kune vatengi vedu munyika dzakawanda.
Sezvo indasitiri yemotokari yeChina (kunyanya chikamu cheEV) ichivaka kuvepo kwepasirese, vazhinji vanopinda kunze kwenyika nevashambadziri vanoda kuongorora mikana mitsva yemusika muChina.Zvichakadaro, Misidhari inokwanisa zvakakwana kuvabatsira kusimudzira bhizinesi remuno, nekuda kwekunzwisisa kwedu kwakadzama tsika dzeChinese, ruzivo rweindasitiri yakakura uye kubatana kwakasimba nemhando dzemotokari dzemuno.
Pazasi pane akasiyana anobatsira uye anobatsira ekubvunzurudza masevhisi atinogona kuita, mukufarira kwevatengi vedu chete:
1. Rutsigiro rwese:
1.1 Tsvagiridzo pamusika weChinese auto & CHESE mugadziri wemotokari
1.2 Kusimbisa CHESE ruzivo.nezvekambani kana nyaya
1.3 Mazano uye rubatsiro rwekutaurirana
1.4 Kunzwisisa paChinese bhizinesi tsika
1.5 Comment pane CHESE zvimwe zvine chekuita nenyaya
1.6 Dudziro (chiChinese/Chirungu)
1.7 Kupinda musangano wakamiririra mutengi
1.8 Kurongeka kwekufamba mukati meChina
2. Kuwana mhando dzeChinese nekuchengetedza hukama
2.1 Kukurudzira mhando dzevamiriri
2.2 Kubata vanhu vakakosha pachikamu che int'l
2.3 Rubatsiro mukusvika kuvakuru veboka
2.4 Rubatsiro mukukurukurirana kwemazuva ese
2.5 Rubatsiro mumusangano nekutaurirana
2.6 Mazano ehurongwa hwebhizinesi
2.7 Zano pachibvumirano chekugovera
2.8 Zano rekutumira & kutumira
Misidhari kusvika parizvino yapa masevhisi ekubvunzana, ane mhedzisiro yakanaka uye kugutsikana kwakanyanya, kune vatengi vanogara muNetherlands, Denmark, Israel, Chile, nezvimwe.
Mari yesevhisi inobhadhariswa kazhinji inosanganisira marudzi matatu: mubhadharo wekubudirira (pamhando yenyika), muripo wepamhepo (pamwedzi) uye mubhadharo werwendo (pazuva).
Export Database (ine Brand) inorongwa pamwedzi wega wega nekuongororwa kwehunyanzvi kweCustoms data.Izvo zvakakosha pasarudzo yehungwaru kune vanopinza kunze kwenyika uye vanogovera veChinese mhando.
Dhatabhesi rine zvinhu gumi nembiri zvine ruzivo rwakakodzera kuziva kuti ndeipi kambani kana mhando inotumira kunze rudzi rwemotokari kunyika dzipi nemitengo ipi uye nemayunitsi mangani.
HS Kodhi:87012000. Iyi itsika 'yakabatana system code.
Mota Type:Rori tirakita yekushandisa mumugwagwa.Kubva pano iwe unogona kuziva mhando, chinangwa kana kutama siyana.
Category:Rori.Mamwe mapoka ekoramu: Vatasvi, SUV, Zvekutengesa, Bhazi, Rori nezvimwe. Uye Misidhari inogonawo kuigadzirisa nenzira yevatengi vedu yekuronga mota.
Exporting Company:Shanghai Wanfa Auto Sales and Service Co., Ltd.
Huwandu (maUnitsi):1. Chishandiso chinoshanda chekuongorora mabudiro emhando yekunze kune vakwikwidzi vayo.
Mutengo Weyuniti (USD FOB):22,572.Vatengi vanogona kutaurirana mutengo unonzwisisika weFOB nemutengesi kunze zvichienderana nedata iri.
Mari (USDFOB):22,572.Export amount=huwandu* mutengo weyuniti.
Global Dunhu:Middle East Mamwe matunhu ekoramu iyi anosanganisira: Africa, Asia (tisingasanganisire Middle East), Oceania, South America, North America, Central America neCaribbean, European Union,Europe (Mamwe), zvichingodaro.
Plant City/Nzvimbo:Anhui Hefei Vamwe.Unogona kuziva kwakagadzirwa mota yekutumira kunze.
MSRP Database inodonongodza mutengo wemugadziri wakakurudzirwa wemhando dzese dzemotokari dzakareruka dziri kutengeswa mumusika weChina wepamba.Izvo zvinofanirwa-kuve nazvo kune avo vanoda:
• Nzwisisa nzvimbo yemusika yemhando dzakasiyana dzemotokari dzemagetsi dzeChinese.
• Iva nepamusoro-soro munhaurirano dzeFOB nevashambadziri veChinese vane simba.
Brand:Ese maChinese emudzimba mainstream brands (kunze kwemhando dzekunze).
Series:Kusanganisira mhando dzakawanda dzakasiyana.
Muenzaniso:Kusanganisira dzakawanda dzakasiyana shanduro.
Shanduro:Kusanganisira ruzivo rwakadai segore remuenzaniso, kutamiswa, trim level, nezvimwe.
MSRP (CNY):Mugadziri weshanduro iyi akataura mutengo wekutengesa pamusika weChinese (mutengo wemari yemuno).
MSRP (USD):Mugadziri weiyo vhezheni akataura mutengo wekutengesa wemusika weChinese (wakashandurwa kuita dhora reUS).
FOB (USD):Iyo vhezheni ye theoretical (kwete chaiyo) FOB mutengo wemusika wemhiri kwemakungwa (inofungidzirwa neCedars timu yekutsvagisa).
Chikamu:Kusanganisira yekutanga mota, MPV, SUV uye minivan (kusanganisa marori nemabhazi zvikamu).
Level:Inowanikwa chete kune chikamu chemotokari;kusanganisira A00/mini, A0/diki, A/compact uye B/pakati.
Iti.:Iyo shanduro yekuchinja injini.
Sales Database inounganidza mavhoriyamu ekutengesa epamwedzi emota dzese dzinogadzirwa muChina kusanganisira idzo dzine CKD/SKD musangano.Ndiyo imwe yeakakosha uye anobatsira maturusi ekunzwisisa iyo Chinese mota indasitiri.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutengesa kunoreva kuFactory Delivery uye kunosanganisira kunze kwenyika kunze kwenyika, asi kusabvisa kutengesa kwemotokari dzinotengeswa kunze kwenyika.
Yese data inotorwa kubva kuCAAM, China huru yemotokari indasitiri mubatanidzwa.
Main Features:Pfupiso inonyora data rese rekutengesa nerudzi rwemotokari, chikamu uye chikamu-chikamu.
Databaseinonyora mavhoriyamu ekutengesa emota pamwedzi uye zvimwe zvakakosha zviratidzo (boka, mugadziri, mhando, mabviro emhando, mhando, chikamu, chikamu-chikamu, nhevedzano, kutamiswa nezvimwewo).
Parizvino, data yekutengesa yeBasic mota, MPV, SUV uye Crossover (Minivan) nemuenzaniso iripo.Idzo dzerori kana bhazi nemuenzaniso hadzipo.
Brand Assessment Report ine chinangwa chekupenda mufananidzo wakajeka weChinese auto indasitiri mamiriro.Chirevo chinoongorora uye kuenzanisa ese maChinese mainstream mota mwenje mhando, inowedzerwa neinodyidzana tafura yezviyero.
Main Contents:Indasitiri Overview: kukurumidza kutenderedza kweChinese mwenje mota yemusika maitiro ekukura & makuru budiriro;eg
Chinzvimbo Methodology: Nhanhatu-dimensional brand yemakwikwi kuongororwa pamwe chete kukosha kweketani;Zvinhu zvakakosha zvebudiriro zvinosanganisira branding, manejimendi, mari, R&D.zvigadzirwa, uye kutengesa;eg
Mamiriro Ekuita: Ipa tafura yezvibodzwa yakabatanidzwa kune ese maChinese mainstream mota dzemagetsi mabhureki;ipai zvakadzama ongororo yemhando yega yega;eg
Flexible Weighting: Chirevo chinowedzerwa netafura inodyidzana yekuyera inoita kuti mutengi agadzirise huremu huremu uye sub-dimension sub-uremu zvinoenderana nekwavo chaiwo mamiriro.
OEM Chirevo chinopa panoramic maonero eChinese anogadzira mota, kusanganisira nhoroondo yekukura kwayo, hutori hwevaridzi, mutsara wechigadzirwa, huwandu hwekugadzira, kuita kwekutengesa, mhedzisiro yemari, R&D kugona, SWOT ongororo, nezvimwe.
Overviewinopa iyo OEM ruzivo rwekutanga semuenzaniso nguva yekutanga, nhamba yevashandi, kugona kwegore, nezvimwe.
Nhoroondoanoongorora uye anoona shanduko yeOEM.
Memorabiliainonyora zvese zviitiko zvikuru, zvinosanganisira R&D, HR, investimendi, zvigadzirwa zvitsva uye marongero ekushambadzira emakore maviri achangopfuura.
Goverana chimiroinotsanangura hukama hweOEM hukama neayo akasiyana siyana uye mabhizimusi akabatana.
Salesyemakore mashanu achangopfuura inoratidza kuita kweOEM chaiko kwemusika uye inogona kuratidza maitiro ayo emangwana.
Data rekutengesa mota dzekutengesa rinoratidza kuita kwayo chaiko mumusika wepamba, ukuwo dhata rekutengesa kunze rinoratidza chikamu chekutengesa kunze kwekutengesa kwakazara.Vaverengi vanogona kuve neanidea nyore kana iyo OEM inochengeta hutano hwekukura kumhanya kana kwete.
Output capacity, kana ichienzaniswa nehuwandu hwekutengesa, inogona kuratidza kana OEM yakashandisa zvizere kugona kwayo kana kwete, izvo zvinogona kukanganisa simba rayo remari.
Mhiri kwemakungwazvidyarwa chikamu chepakati cheOEM's global expansion strategy.Sezvo nyika dzichikwidza mitengo yemitengo yekunze kuchengetedza maindasitiri emotokari emuno, mhando dzeChinese dzinogona kukurumidzira kuwanikwa kwenzvimbo nekuvaka zvimwe zvivakwa zvekunze.
Mushumo wezvemariinopfupikisa iyo OEM ichangoburwa yemakore mashanu ekuita kwemari, zvinoenderana neanogona kuwana vaverengi kana iri kuita mari nekuvandudza pundutso.Cheti yemutengo wemasheya inoratidza kana vatengesi vekuChina vane chivimbo mumasheya kana kwete.
R&Dkugona kunoongorora iyo OEM's tekinoroji kuziva uye chirongwa chayo chekutanga chigadzirwa.Inogona kufanotaura kana OEM yaizokwanisa kuchengetedza kana kuvandudza nzvimbo yayo yemusika mune ramangwana.
SWOT(kusimba, kushaya simba, mikana uye kutyisidzira) ndeye-kutenderera, nyanzvi uye chinangwa chekuongorora mamiriro eOEM azvino, zvichibva pahunyanzvi hwakasimba hweindasitiri yeCEDARS pamwe nedata rakavimbiswa.
12.Commentssanganisa iyo yeOEM yenguva refu yekukura zano neongororo pfupi kubva kuCEDARS.
Dhata kubva kune ane chiremera masosi (semu CAAM neCustoms):
Mibairo yemari inosanganisirwa (yemakambani akanyorwa chete):
Price Report inoongorora misiyano yeMSRP nemidziyo-yakagadziridzwa mutengo wemotokari dzevatakuri dzinotengeswa kuChina.Ruzivo rwakakosha urwu rwakakosha kune vanogovera kuti vanzwisise kwete chete chimiro chechigadzirwa asiwo mutengo wemakwikwi ekufamba kwemhando dzavanomiririra.
Mhinduro kumibvunzo iri pasi apa:
1. Ndeipi nzvimbo yemuenzaniso wakasarudzwa muChina?
2. Ndeipi iyo chaiyo MSRP muChina yemuenzaniso wakasarudzwa?
3. Zvakadini nemamodheru anokwikwidza?
4. Chii chiri kutengesa kushanda kwemuenzaniso uyu uye vadzivisi vayo?
5. Chii chinonzi configuration?
6. Chii chinofanira kuva chinonzwisisika FOB mutengo?
Pepa 1: Chipfupiso cheMutungamiriri
i.Brand & Model.Chirevo chinosanganisira vangangoita 5 vakwikwidzi kazhinji.Chirevo chinogona kuwedzera kana kugadzirisa kune yakatarwa mhando / modhi zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
ii.MSRP muChina Musika (CNY + USD), isati yagadzirisa kukosha uye mushure.
iii.Inofungidzirwa FOB USD, zvichienderana nemutengo une chekuita nekutengesa kunze kubva kuChina.(mutengo unosanganisira VAT, mutero wekushandisa, China dealer margin, Chinese market overhead, Export variable cost and other cost).
Magadzirirwo Details uye Value Adjustment.
ii.360 ° kuenzanisa.Anosvika mashanu emakwikwi emhando kubva kuEurope, America, Korea, Japan & China.
iii.'Apple kune Apple' kuenzanisa.
iv. Estimate inonzwisisika FOB mutengo.
Indasitiri Report inopfupikisa mamiriro ehupfumi hweChina uye inopa ongororo yakadzama yezvekuita kweChina auto industry maererano nekutengesa, kunze kwenyika, mari, zvigadzirwa, marongero, kudyara, nezvimwewo. Chirevo ichi chinovandudzawo zvichangobva kuitika zvemhando dzemuno dzeChinese dzakasarudzwa.
Tsika tsvagiridzo iripo:
Iyo Indasitiri Report's standard edition haisanganisire dunhu/mhando yekuongorora, nepo zvinyorwa zvayo zvakakosha zvichisanganisira kuongororwa kwedunhu/mhando.
Kuongororwa kwedunhu kunobata nyika nhatu kana misika munharaunda inoenderana;kune matunhu mapfumbamwe pasi rose: Africa, Asia (Kunze. Middle East), Central America neCaribbean, Europe (Zvimwe), European Union, Middle East, North America, Oceania, uye South America.
Ongororo yemhando inowanikwa chete yeChinese mhando dzemba (Chery, Changan, Geely, Greatwall, nezvimwewo), uye maitiro emari emhando anongowanikwa kune vanotengeserwa pachena automaker.
Yakanamirwa pazasi muenzaniso weIndasitiri Report.
Mishumo yezvemari inoburitswa nemakambani ese emotokari eChinese anotengeswa pachena muShanghai, Shenzhen, Hong Kong, New York kana chero imwe stock exchange.Iwo chishandiso chakakosha chekuyera hutano hwemari yevagadziri kusanganisira kuita pundutso, kukura, chikamu chechikwereti, nezvimwe.
Zvikamu zveMota yeHyundai, Ford Transit Zvikamu Zviri Kutengeswa, Shock Absorber Mota, Chery Qq Zvikamu, Auto Parts Sourcing, Auto Zvikamu ZveKia,